7.1 System ကိုကား Player ကိုများအတွက် Android ကို Universal China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:7.1 System ကိုကား Player ကိုများအတွက် universal,အန်းဒရွိုက်က Universal ကား Player ကိုများအတွက် 7.1 စနစ်,အန်းဒရွိုက်က Universal ကား DVD Player ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > universal အန်းဒရွိုက်ကား DVD > 7.1 System ကိုကား Player ကိုများအတွက် Android ကို Universal
7.1 System ကိုကား Player ကိုများအတွက် Android ကို Universal
7.1 System ကိုကား Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြသည် 1. ကို Android က Universal , ဂျာမနီ, အီတလီ, အီရန်, ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, etc ။
သင်ဟာအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော free.You များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးတိကျမှုမရနှင့်ကို up-to နိုင်သည် 7.1 System ကိုကား Player ကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောသည် 2.This အန်းဒရွိုက်က Universal -date လမ်းကြောင်းများ, traffic ကို data နဲ့ပိုပြီးနေထိုင်ကြသည်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
7.1 System ကိုကား Player ကိုပင်မရာထူးအမည်များအတွက် 3. ကို Android က Universal:
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : universal အန်းဒရွိုက်ကား DVD
7.1 System ကိုကား Player ကိုများအတွက် universal အန်းဒရွိုက်က Universal ကား Player ကိုများအတွက် 7.1 စနစ် အန်းဒရွိုက်က Universal ကား DVD Player ကို H1 2016 မော်တော်ကား Player ကိုများအတွက် W211 သည် Dash ကား Player ကိုခုနှစ်တွင်7လက်မကား DVD Player ကိုဂျီပီအက်စ် Dash ကား DVD Player ကိုခုနှစ်တွင် 2017 ရီယိုများအတွက် navigation